Showing ३१-४० of ३,९३९ items.
आजको राशिफल, जेठ २२ गते विहीबार
वि.सं. २०७७ जेठ २२। बिहीवार। इ.स. २०२० जुन ४। ने.सं. ११४० तछलाथ्व। ज्येष्ठ शुक्लपक्ष। त्रयोदशी, ५:१० बजेदेखि चतुर्दशी, २७ :०३ उप्रान्त पूर्णिमा। मेष (चु,चे,चो,ला,लि,लिु,ले,लो,अ)ः आम्दानी बढ्ने छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुख सहयोग प्राप्त होला । काम गर्ने जांगर र आत्मबल बढ्ला । वृष (इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो)ः मनमा उत्साह र हिम्मत बढ्नेछ । भेटघाटमा मन रमाउनेछ । खर्च बढेपनि आम्दानीका प्रसस्त मार्ग खुल्नेछन् ।मिथुन (का,कि,कु,घ,ङ,छ,के,को,ह)ः आफ्नै प्रयासमा आम्दानीका नया“ स्रोतहरु फेला पर्नेछन् । शैक्षिक क्षेत्रको माध्यमबाट विशेष स्थान प्राप्त होला । कर्कट (हि
प्रकाशित मितिः जेठ २२, २०७७
आजको राशिफल, जेठ २० गते मंगलबार
वि.सं. २०७७ जेठ २०। मंगलवार। इ.स. २०२० जुन २। ने.सं. ११४० तछलाथ्व। ज्येष्ठ शुक्लपक्ष। एकादशी, ०९:५६ उप्रान्त द्वादशी। मेष (चु,चे,चो,ला,लि,लिु,ले,लो,अ)ः मन केही मात्रामा रमाउनेछ । आम्दानी राम्रै होला । नया“ सोचविचा उत्पन्न हुनुका साथै सिर्जनात्मक काममा सहभागी भइएला ।वृष (इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो)ः मन आनन्दित हुने समय छ खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ । लाभदायक यात्रा पनि हुने प्रवल सम्भावना छ ।मिथुन (का,कि,कु,घ,ङ,छ,के,को,ह)ः यात्राको समय छ । शारीरिक परिश्रम अति बढी नै गरे पनि राम्रै कामको लागि होला भन्ने ठान्नुहोला ।कर्कट (हि,हु,हे,हो,डा,डि,डु,डे,डो)ः घरायसी सामान किनमेल गर्ने समय छ । सानो ठूलो उप
प्रकाशित मितिः जेठ २०, २०७७
आजको राशिफल, जेठ १९ सोमबार
विसं २०७७ जेठ १९। सोमवार। इस २०२० जुन १। नेसं ११४० तछलाथ्व। ज्येष्ठ शुक्लपक्ष। दशमी, १२ः२४ उप्रान्त एकादशी।मेष (चु,चे,चो,ला,लि,लिु,ले,लो,अ) समय राम्रो छ । आर्थिक लाभको विभिन्न उपायहरु आउलान् । पठन पाठन तथा लेखन कार्यमा रुचि बढ्ला । यात्रा अनिवार्य जस्तै होला ।वृष (इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो) प्राविधिक तथा व्यवसायिक दृष्टिले आर्थिक लाभको समय छ । सामाजिक तथा धार्मिक काममा सक्रिय भइएला । मन प्रशन्न रहला । मिथुन (का,कि,कु,घ,ङ,छ,के,को,ह) समय सामान्य खालको छ । पारिवारीक जीवनमा केही खटपट पर्ला जस्तो छ । पैतृक सम्पत्तिमा केही वादविवाद नहोला भन्न सकिन्न
प्रकाशित मितिः जेठ १९, २०७७
मेषः आज नयाँ वस्त्र तथा अलंकार प्राप्ति हुनेछ । न्यायिक र प्रशासनिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । बृषः नयाँ कार्यको चर्चा चल्नेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागिपनि श्रेष्ठ समय रहेकोछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । मिथुनः राज्यबाट मान सम्मान पाइनेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । कर्कटः महिला वा मित्रबाट विशेष आज भाग्यले साथ दिनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेलाछ । माइलो यात्राको योग रहेको छ । सिंहः आज भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । शिक्षामा सफलता पाईनेछ । श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुनेछ । स्वास्
आज तपाईंको भाग्य कस्ताे छ हेर्नुस्ः राशिफल
मेषः आज आफन्त र प्रिय व्यक्तिसंग भेट घाट होला । शुभकार्यको योजना बन्नेछ । धैर्य गरी मिहिनेत गरेमा कार्यसिद्धि हुनसक्छ । बृषः परीक्षा आदि प्रतिस्पर्धामा उर्तिण हुन सकिनेछ । आत्मिक सन्तुष्टि मिल्नेछ । नयाँ कामको योजना बन्ने वा थालनी हुनेछ । मिथुनः आज दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेलाछ । व्यापार व्यवसायमा फाईदा होला । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । कर्कटः अभिभावकको सुझावले उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्नेछ । क्षमता प्रदर्शन गर्ने क्रममा पदोन्नतिको ढोका खोलिनेछ । सिंहः नगद सापटी लिएका आफन्तहरूले वचन पूरा नगर्दा आर्थिक झन्झट आइलाग्न सक्छ । स्वास्थ्यको भने विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ । कन्याः सामाज
मेषः दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । बृषः आजको दिन पारिवारिक हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय हो । परोपकारजन्य कार्यमा लगाव बढ्ने र धनसञ्चयको योजना बन्नेछ । मिथुनः आज धार्मिक र सामाजिक महत्त्वको क्षेत्रको भ्रमण हुनसक्छ । दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायमपनि हुनेछ । कर्कटः आज भाग्यले साथ दिनेछ । आज परोपकार तथा सहयोग आदिमा पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ । सजिलै अरूको मन जित्न सकिनेछ । सिंहः घरायसी वातावरणमा केही असामान्यता देखिन सक्छ । झिनामसिना काममा धेरै समय खर्चनु पर्नेछ । आम्दानीमापनि कमी आउनेछ । कन्याः
प्रकाशित मितिः जेठ १५, २०७७
मेषः एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । बन्धु बान्धवबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । साँझपख शुभ समाचार आउन सक्छ । बृषः पुनर्मिलनको योग पनि रहेको छ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि श्रेष्ठ समय रहेकोछ । कूटनीतिक नियोगको सहयोगपनि मिल्ला । मिथुनः कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । सामाजिक कार्य राम्रो हुन्छ । कर्कटः आज गरेका कार्यमा ढिलासुस्ती हुनेछ । आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । प्रेमप्रसङ्गमा समेत नरमाइलोपन आउनेछ । सिंहः आज इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् । मित्र वा आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । प्रविधि मार्फत टाढा रहेका आफन्तसंग
मेषः आज कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । न्यायिक कार्यमा सफलतापनि मिल्नेछ । बृषः आज रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । मिथुनः शुभ कार्यको योजना बन्नेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । महिला वर्गबाट सहयोग मिल्नेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्ला । कर्कटः आज मनमा अधैर्य र कमजोर रहला । घर परिवारमा झै–झमेलाको अवस्था आउनेछ । दिनको उत्तरार्धमा धन खर्च हुनेछ । सिंहः आज जटिल ठानिएको कामसमेत सम्पादन हुनसक्छ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्छ । नयाँ कमको योजना हुनेछ । कन्याः बन्
मेषः ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । राजनैतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा भने त्यति राम्रो नहोला । बृषः नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । सहार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । पुराना योजना बिस्तारै अघि बढ्नेछ । मिथुनः लगनशीलताको कमिले गर्दा ठूलो उपलब्धि हातपार्न नसकिएला । सहकर्मीबाट विरोधपनि आउन सक्छ । खर्चसमेत बढ्ने योग छ । कर्कटः आज धैर्य एवं लगनशीलताले अवसर दिलाउनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । प्रेम सम्बन्ध अझै कसिलो हुनेछ । सिंहः आज भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउनेछ । साहित्य र मनोरञ्जनमा रुचि बढ्नेछ । कन
प्रकाशित मितिः जेठ ११, २०७७
मेषः आजको दिन भाग्यशाली भएर देखा पर्नेछ । सहयोग गर्ने र आश्वासन बाढ्नेहरु धेरै भेटिनेछन् । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । वृषः अतिथिको रूपमा सत्कार पाइएला । कृषि क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । सुखद् मिलनको योग छ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ । मिथुनः मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । मालसामान हराउन सक्छ, होसियार रहनु पर्छ । कर्कटः आज शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । धार्मिक तथा समाज सेवामा मन लाग्नेछ । आफन्तको सल्लाह, सहयोग र हौसला पाईनेछ । सिंहः पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । समाजमा प्रभाव पार्न सकिनेछ ।
प्रकाशित मितिः जेठ १०, २०७७
इटहरीको बजेट उत्कृष् ...